Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A January 2011 (8)
Q and A January 2011 (8)
1. I would like to ask if
2. နှာစေး နှာရည်ယိုနေတာ ၃ နှစ်နီးပါ ရှိနေပါပြီ
3. အူမကြီးကင်ဆာရောဂါမှာလဲ အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့
4. လိင်အင်္ဂါက ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ငုံနေတာပါ
5. LIBLAN ဆေးက ဘာအတွက် သောက်ရတာလဲ
6. Condom သုံးပေမယ့် ယောက်ျားမှာ ပွေးတို့ ဝဲတို့ပေါက်နေမယ်ဆိုရင်
1 Feb 11, 09:49
Hi doctor I would like to ask if my vigina got warts supposed (Kywat Noe). I remembered, if I plug out, my hairs keep on duplicating and feel sometimes only itchy if I scratch there.
(1) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2009/08/warts.html and
ကျမ အသက် ၃၂ နှစ်ပါ အိမ်ထောင်မရှိ (့) ပြည်နယ်ကပါ။ ကျမ နှာစေး နှာရည်ယိုနေတာ ၃ နှစ်နီးပါ ရှိနေပါပြီ။ အေးတဲ့ အချိန်တွေမှာ ပိုဖြစ်ပါတယ်။ မနက်မိုးလင်း အိပ်ယာထ ညဘက်အေးတဲ့ အချိန် နေပူထဲသွားရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မိုးရွာရင်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခေါင်းလျှော်တာတော့ ၁ ပတ်ကို မှ ၁ ခါဘဲ လျှော်ပါတယ်။ ရန်ကုန် နား နှားခေါင်း လည်ချောင်း ဆေးရုံကြီးမှာလည်း ၃ ခါ ပြဖူးပါတယ်။ အပြင်ဆေးခန်းမှာလည်း ပြဖူးပါတယ်။ ရောဂါက မပျောက်ဖူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ရောဂါပျောက်မည့် နည်းလမ်းလေ ဆေးလေး ဖြေကြားပေးပါ။ လိုအပ်ရင် ရန်ကုန်မှာ ဘယ်ဆေးခန်းကို ထပ်ပြရမလဲ ဖြေကြား လမ်းညွန်ပေးပါ။
• Nasal Polyps နှာခေါင်းထဲ အသားပိုဖြစ်ခြင်း
• Sinusitis သို့မဟုတ် ကိုရီးယား ကလာသည့် မေးခွန်းအား ဖြေကြားခြင်း တွေကို ဖတ်ပါ။ လိုသေးရင်မေးပါ။
ကျွန်တော့် အသက် (၃၇)နှစ်ရှိပါပြီ ကျွန်တော့်အသက်(၁၇)နှစ်ခန့်က လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ စအိုအပြင်ထိ ထွက်တာပါ အခင်းသွားပြီးတိုင်း ပြန်ထည့်ပေးရပါတယ်။ အသက်(၁၉)နှစ်လောက်ကျတော့ ကျွန်တော့်အဖွားက ဘုန်းကြီး တပါးဆီက လိပ်ခေါင်း ရောဂါပျောက်အောင် မန်းပေးလိုက်တဲ့ ကြက်ဥပြုတ်တလုံးယူလာပြီး ကျွေးပါတယ်။ အဲဒီ ကြက်ဥပြုတ် စားပြီးနောက် တရက်ကစပြီး လိပ်ခေါင်း မထွက်တော့ပါ၊ သွေးလဲ မကျတော့ပါ။ အသက် (၃၄)နှစ် လောက်ကစပြီး အခင်းသွားရင် ဝမ်းက လက်သန်းလုံး လောက်လေးတွေပဲ သွားပါတယ်။ တခါတခါ အခင်းသွားရင် ကြာပါတယ်။ စိတ်ထဲမှာလဲ စအိုဝမှာ တခုခုပိတ်နေသလို ခံစားရပါတယ်။ အခင်း သွားရတာ ကြာလို့သာ ထွက်လိုက်ရတာ သွားလို့ မပြီးသေးဘူး။ တရက်ကို လေးငါးခါ သွားရပါတယ်။ အခင်းသွားချင်ပြီဆိုရင်လဲ ကြာကြာ မထိန်းနိုင်ပါဘူး။ ပြီးခဲ့တဲ့ တလလောက်က အခင်းသွားတာ လိပ်ခေါင်းလဲမထွက်ဘဲ သွေးတွေ ပန်းထွက်ပါတယ်။ သွေးစိမ်းတွေပါ။ တော်တော် များပါတယ်။ နောက်ရက်တွေတော့ မထွက်တော့ပါဘူး။ စာအုပ် တအုပ်မှာ ဖတ်ဖူးတာ အူမကြီး ကင်ဆာ ရောဂါမှာလဲ အဲလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုလို့ စိတ်အနှောက်ယှက် ဖြစ်နေရပါတယ်။ ခရီးဝေး သွားရမှာတောင် ကြောက်နေပါတယ် ကူညီပေးစေလိုပါတယ်။
• Piles လိပ်ခေါင်း ရောဂါ အမေး-အဖြေများ ကိုဖတ်ပါ။ လိုသေးရင်မေးပါ။
အူမကြီးကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတွေက များသလို တိတိကျကျလဲ မရှိတတ်ပါ။ အားယုတ်တာ၊ အသက်ရှူ အားမရတာ၊ ဝမ်းသွားချိန် မမှန်ဖြစ်လာတာ၊ ဝမ်းက မဲနီနီအရောင်ဖြစ်တာ၊ လူကပိန်လာတာ၊ ဗိုကနာ၊ ကြွက်တက်၊ ဗိုက်ကယ် စသလိုတွေ ဖြစ်တယ်။ တခြား ရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ Irritable bowel syndrome, Ulcerative colitis, Crohn's disease, Diverticulosis, Peptic ulcer ရောဂါတွေနဲ့ ဆင်နေတယ်။ ရောဂါဖြစ်နေတာကြာမှ ဒီလို လက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်။
ဖြစ်တဲ့ နေရာအပေါ်မှာလဲ လက္ခဏာတွေက မူတည်တယ်။ အူမကြီးဆိုတာက ညာဘက်၊ ကန့်လန့်၊ ဘယ်ဘက်ဆိုပြီး အရှည်ကြီး ရှိတယ်။ ဘာဘက်က ကျယ်လို့ ကင်ဆာလဲ အကြီးကြီး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဗိုက်လက္ခဏာတွေနဲ့ သွေးအားနည်းတာ ဖြစ်မယ်။ Iron deficiency anemia သွေးအားနည်းလာရင် အားယုတ်၊ ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်၊ အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်။ ဘယ်ဘက်က ကျဉ်းတော့ ဗိုက်နဲ့ဆိုင်တာသာ ဖြစ်ပြီး အပေါ်ကစမ်းလို့ရတယ်။ အူပိတ်တာ ဖြစ်လာစေမယ်။ အူပိတ်-တဝက်တပျက် ပိတ်နေရင် ဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်းက သေးသေးသာသွားမယ်၊ ဝမ်းပျက်တာ၊ ဗိုက်နာတာ၊ ကြွက်တတက်တာ၊ ဗိုက်ကယ်တာတွေ ခံစားရမယ်။ သွေးနီရဲရဲပါရင် အူမကြီးအောက်ပိုင်းက လာတာ။
ရောဂါသေခြာဘို့ Barium enema x-ray အောက်ကနေ ဆေးသွင်းပြီး ဓါတ်မှန်ရိုက်တာနဲ့ Colonoscopy ကရိယာထည့် စစ်ဆေးတာနဲ့ သိနိုင်တယ်။ CEA (Carcinoembyonic antigen) သွေးစစ်နိုင်တယ်။ ကံကောင်းတာက အူမကြီး-ကင်ဆာဟာ အာရှိ-အာဖရိမှာ နည်းတယ်။ အနောက်နိုင်ငံမှာ ပိုများတယ်။ အနောက်နိုင်ငံက အစားအစာမျိုး စားသူတွေ ပိုဖြစ်စေနိုင်တာ တွေ့ရတယ်။ အဲတော့ ပဲပြုတ်-ချဉ်ရည်-ငရုတ်သီးထောင်းစားတာ ပိုကောင်းတယ်။
ကျွန်တော်က အသက် ၂၉ နှစ်ပါ။ ကျွန်တော်က (့) တိုင်းထဲက တောမြို့ကပါ။ လောလောဆယ် ရန်ကုန်မှာ အလုပ် လုပ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့် လိင်အင်္ဂါက ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ငုံနေတာပါ။ ဆီးသွားရင် အရမ်းကြာပြီး အားမရပဲဖြစ်နေပါတယ်။ နာကျင်တာမျိုး အောင့်တာမျိုးလည်း ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် သိချင်တာက လိင်အင်္ဂါ ဖြတ်တာ Circumsicion ကို ဘယ်လို ဆေးခန်းမျိုးမှာ လုပ်ပေးတာပါလဲ။ ဆေးခန်းကို ဘယ်လိုပြောပြီး ရောဂါပြရမလဲခင်ဗျာ။ ဖြစ်နိုင်ရင် ရန်ကုန်က Circumsicion ဖြတ်ပေးတဲ့ ဆေးခန်း လိပ်စာ ညွှန်ပြ ပေးပါခင်ဗျာ။ ဆေးကုသ စရိတ်လည်း သိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပန်းငုံတာ (Circumsicion) ကိုခွဲတာ သာမန်ခွဲစိတ်မှုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထုံဆေးသာ သုံးမယ်။ ပြင်ဆင်မှုလဲ အထူးမလိုပါ။ ခွဲပြီးလဲ ချုပ်ရိုးဖြုတ်စရာ မလိုတာလဲ ရှိတယ်။ ဖြုတ်စရာလိုလဲ ၇ ရက်မှာလုပ်တယ်။ ဆေးရုံတက်နေစရာတောင် မလိုပါ။ ကျွန်တော်က တိုင်းပြည်ထဲမှာ မနေရလို့ အထဲအခြေအနေတွေ သိပ်မသိပါ။ ရိုးရိုးဆရာဝန်တွေကလု လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ သာမန်ဆေးရုံမှာလဲ လုပ်တယ်။ တောဆေးရုံမှာလဲ လုပ်နိုင်တာပါဘဲ။
“ပန်းငုံတယ် ထင်တယ်” လို့သာ ပြောပါ။ ဆရာဝန် တွေဟာ လူနာကနေ ရောဂါနာမယ် တပ်ပေးတာ မကြိုက်ကြဘူး။ သူတို့က ဆရာကိုး။ (ကျွန်တော်လဲ ငယ်တုံးကဆို အဲလိုဘဲ။) ဖြစ်နေတာ၊ ခံစားနေရာတာ၊ ပျောက်ချင်တာကိုသာ ပြောသင့်တယ်။ “ပန်းအဖျားက ပိတ်နေ-ကျဉ်းနေတယ်။ ဆီးအသွားရ ခက်တယ်” ပေါ့။
29 Jan 11, 14:45
LIBLAN ဆေးက ဘာအတွက် သောက်ရတာလဲ။
Liblan ဆေးမှာ Clidinium Br 2.5 mg, Chlordiazepoxide5mg တွေပါတယ်။ Antispasmodics အမျိုးအစားဆေး ဖြစ်တယ်။ လေနာ၊ အူ အလုပ်မှန်မှန်လုပ်တဲ့ရောဂါတွေမှာ သုံးတယ်။ ရာသီလာလို့နာတာကို သွေးမဆင်းခင် ၃-၄ ရက်မှာ ကြိုသောက်ပါ။ လူကြီး တနေ့မှာ ၃-၄ လုံး။ ဆေးကို အစာမရှိချိန်မှာ သောက်ပါ။ မျက်စိရေတိမ်ဖြစ်နေသူ မသင့်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး အိပ်ချင်တယ်၊ ကြွက်သား အားယုတ်တယ်။
လိင်ဆက်ဆံတာနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ရောဂါကူးမကူး သိချင်လို့ ပါ။ Condom သုံးပေမယ့် ယောက်ျားမှာ ပွေးတို့ ဝဲတို့ပေါနေမယ်ဆိုရင် မိန်းမမှာရာသီလာနေရင် ကူးနိုင်လားသိချင်ပါတယ်။
Condom သုံးတာက ကျားလိင်တံကိုသာ ဖုံးတာမို့၊ ကျားကနေမ၊ မကနေကျား STDs တွေကို မကူးစေနိုင်ပါ။ ဒါပေမဲ့ (ကွန်ဒွမ်) ဖုံးမထားတဲ့ နေရာတွေမျာ STDs မဟုတ်တဲ့ ကူးစက်ရောဂါ ရှိနေရင်တော့ အကာအကွယ် မပေးနိုင်ပါ။ ပွေး၊ ဝဲ၊ ကြွက်နို့၊ ရေယုံ။